सुरक्षाकर्मीले जोखिम मोल्दै गरेको योगदान - Pradesh Today सुरक्षाकर्मीले जोखिम मोल्दै गरेको योगदान - Pradesh Today
सुरक्षाकर्मीले जोखिम मोल्दै गरेको योगदान
राष्ट्रको छवि उचो पार्न, आम नागरिकको जीवनलाई शान्ति, सुरक्षाको महशुस गराउँदै राष्ट्रको सेवा गर्नमा जे–जस्तोसुकै अवस्थामा पनि ठूला–ठूला जोखिम उठाउँदै अहोरात्र आफ्नो कर्तब्य पालन गर्नुहुने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूमा तपाईहरूले पु¥याएको योगदानप्रति सम्मानसहितको सलाम !
मलाई करिब ४०÷५० वर्ष अगाडीको एउटा घटना वर्तमान प्यूठानको साविक फाप्ली गाविस लुप्लुङको थियो । उक्त घटना हालसम्म झलझल्ती याद आइरहन्छ ।
त्यतिबेला म भर्खरै २ कक्षामा पढ्दै थिए । समय जाडोको मौसम थियो । शुक्रबारको दिन थियो । त्यो दिन विद्यालयको शुक्रबार हुने अतिरिक्त क्रियाकलापसहितका कार्यक्रम गरेर टाढा जाने डेरा गरी बस्नुहुने हाम्रा आदरणीय गुरूहरू पनि घर–घर गएको अवस्था थियो । हामी विद्यालय वरपरका साथीहरू खेल मैदानमा खेल्न ब्यस्त थियौं । समय छोटो दिनको कारण ५ बज्दै थियो होला ?
साँझ पर्दै थियो । हामी खेल्दै गरेको ठाउँमा नयाँ दुईजना अपरिचित युवाहरू आउनु भो । उहाँहरूले हामी सबैलाइ नमस्ते भन्नु भो । हामी अक्कबक्क भयौं कहिल्यै नदेखेका नचिनेका मान्छेहरूले नमस्ते गर्नुहुन्छ । देख्दा हाम्रा गुरूहरू जस्ता राम्रा सफा कपडा लगाउनु भएको छ ।
हामी कोही पनि बोलेनौं फेरी मीठो तरिकाले सोध्नु भो । बाबु नानी हो यहाँ कतै पसलहरू छन् ? म झट्ट पट्ट बोले हाम्रो घरमा पसल थियो । अ हाम्रो घरमा छ ।
उहाँहरू मेरो नजिकै आएर त्यसो भए बाबुको घर जाउ है मिठाइ किन्नुपर्ने छ । अरू पनि जाउ सबैले मिठाइ खाउला भन्दा त्यहाँको माहोल पूरै उहाँहरूको भनाइमा खुसी हुँदै झुम्मिदै पछि लाग्यो ।
सबैजना पसल गयौं । मिठाइ किन्नु भो सबैलाई बाँड्नु भो । अरूलाईभन्दा मलाई बढी दिदै मेरो बाबासँग सोध्नु भो । बुबा यो गाउँको विद्यालयमा पढाउने शिक्षक हुनुहुन्छ ?
भनेपछि बाबाले अ छन् । मेरो भाइ पर्छन् । नजिकै गाउँमा घर छ भन्नु भो । केही काम थियो की ? अ बुबा हाम्रो पुरानो चिनजानका साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको घरमा गाईको घ्यू पाइन्छ रे ! त्यसैले भेट्न खोजेको भनेपछि बाबालाई फेरी सोध्नु भो । बुबा हजुरसँग स्कुलको केही जिम्मा छ ?
बाबा त्यतिबेला विद्यालयको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । बाबाले अ म यो विद्यालयको कोषाध्यक्ष छु भन्नु भो । बास्तवमा उहाँहरूले सम्पूर्ण विषयवस्तु पूरै अध्ययन गरेर आउनु भएको रहेछ । त्यसपछि बाबुलाई सरको घर देखाउन पठाउनुहुन्छ ?
बुबा भनेपछि बाबाले मलाई जाउ बाबु घर देखाइदेउ भन्नु भो । म अगाडि लागे घरमा पु¥याए । त्यतिबेलाको समय हामी सरहरूको नजिक पर्न डराउँथ्यौं ।
आँगन यतैबाट घर सिकाए म यतै उभिए । उहाहरूले सरको बाबासँग परिचय गर्दै हामी प्रहरी हौं बुबा हामी हजुरको छोरालाई केही सोधपुछ गर्न अड्डामा लान आएका हौं भनेपछि म रूदै–रूदै घर फर्किए ।
म घरमा गएपछि बाबाले सोध्नु भो । बाबु पाहुनाहरूलाई सरको घरमा पु¥यायो ? भनेर सोध्नु भो । मेरो जवाफभन्दा पनि हामीलाई पढाउने सरलाई पुलिसले पकड्न आएको भावनाले सताएको कारण बुबासँग राम्रोसँग भन्न सकेन । बरू पीडाबोधका शब्द पोखे ।
बुबा तिनीहरू त पुलिस रहेछन् । सरलाई अड्डा भन्ने कहाँ हो ? त्यही लाने रे ! भनेपछि बुबा केही नबोली गाउँ निस्कनु भयो । म पनि बाबाको पछि–पछि दगुरे भेट्ने जतिलाई पुलिसले हाम्रा सरलाई पकड्र लगे भन्दै गए ।
हामी सरको घरमा पुग्दा त्यहाँ गाउँका जान्ने मान्नेहरू पुग्दै थिए । सरको घरमा २०÷२५ वटा गाई थिए । सरले गाई, भैंसीलाई साँझको घासपात गर्दैको समयमा ति दुईजना प्रहरीहरूलाई स्वयम् सरको बुबाले गोठमै लगेर यही हो मेरो राजा हुने राजा विरोधी छोरा भन्दै सिकाएपछि सर अति सोझा ब्यक्ति राजनीतिको धेरै सुझबुझ नहुँदा हुँदै पनि साथीको कारण,
केही समय भारतमा आफ्नो बुबासँग बसेर पढ्दाको समय विद्यार्थी जीवन, त्यतिबेलाको पञ्चायत विरोधी नेपालको गतिविधि बढदै गएको प्रवासी माहोलको कारण, नेपालमा आएपछि त्यतिबेला गाउँमा पढे लेखेका मान्छे नभएको समयमा गाउँको स्कुलमा आउने बित्तिकै शिक्षक हुने मौका पाउँदा बुबा आमा गाउँघर सबै खुशी भएको अवस्थामा एकाएक प्रहरीले गिरफ्तार गर्न आउँदा सबै आक्रोशमा आए ।
अर्को कुरा गाउँघरमा राजा विरोधी भन्ने शब्द नै पहिलो थियो । एउटा स्कुलका दुईजना शिक्षक एउटै समयमा गिरफ्तारीका हल्लाले पनी गाउका प्रायः मानिस उहाँको पक्षमा कोही उभिएन त्यसमा पनि उहाँ स्वयम्ले म जेलनेल सहन तयार छु भनेपछि उहाँलाई अड्डा लगियो ।
जेल चलान भयो । त्यतिबेलाको प्रसंग अहिले किन उठाइयो ? भन्ने लाग्ला ? बास्तवमा नेपालको सुरक्षादस्ता अति दक्ष सक्षम छ भन्ने त्यतिबेलाको प्रहरी दाजु अंकलहरूले देखाएको कुटनीतिक सद्भावले मलाई अहिलेसम्म प्रभाव पा¥यो र अहिले पनि नेपालको मानवीय,
प्राकृतिक, फोहरी राजनीतिबाट उत्पन्न विकृति छिमेकी राष्ट्रबाट उत्पन्न समस्याप्रतिको योगदान देख्दा महशुस हुन्छ किनभने अनुसन्धानको पाटो, गिरफ्तारीको शैली तरिका,
देशलाई परी आएको समयमा खटनपटन, जतिबेला नागरिक जब घरभित्र ढोका बन्द गरेर बस्नुपर्ने बाध्य हुन्छ त्यतिबेला एउटा लाठीको भरमा एउटा पुरानो राइफल बन्दुकको भरमा उहाँहरू सडकमा खट्नुपर्ने बाध्य हुन्छ ।
समय–समयमा देशमा हुने राजनीति परिवर्तनका चरम उत्कर्षका द्वन्द्वका आपत्कालीन समस्या, सत्तामा पुग्नेहरूले पुलिस प्रशासनको मातमा गर्ने भ्रष्टाचारका लगायतका ज्यादती,
राष्ट्रमा आइपर्ने मानवीय सीमा सुरक्षा हालै हाम्रा सीमा अतिक्रमण भएका ज्यादतिका घटनामा एवं प्रकृतिका कोरोना, बाढी, पहिरो, डुबान कटान बस्ती नागरिकहरूमा आइलग्ने आपत् विपतका समयमा कहिले पनि इमान्दार सुरक्षा दस्ताका मान्छेले भोक, निद्रा अल्छी,
सजिलो, अप्ठेरो, समस्या, केही नभनेर उर्दी भयो भने हवस् सर भनेर ड्युटीमा खटेकै कारण हाम्रो राष्ट्रको हामी नागरिकको सुरक्षा संरक्षण भएको हो भन्नेमा दुईमत छैन ।
हालको यो कोरोनाभाइरसको विश्वनै रूवाबास पारेको े समयमा निडर र शानदार तरिकाबाट खटेर देश र जनताको सुरक्षा गर्नुभएकोमा पनि खट्नु हुने सबैमा सम्मान सहितको सलाम गर्नैपर्छ । सबै पक्ष राम्रो हुँदाहँुदै पनि बिडम्बनाको कुरा कहिले श्रीमती हत्याका केस,
आफ्नो नियन्त्रणमा साधारण नागरिकलाई लिएर कुटी–कुटी मारेका घटना, सुनकाण्ड, बलात्कारका घटनाका अपराधी क्रियाकलापमा मुछिएका घटनाले सिंगो संस्थाकै बदनाम भएको देख्नु सुन्नुपर्दा आत्मा दुख्दो रहेछ ।
कुनै–कुनै दाजुभाइका ब्यवहारको कारण सुरक्षाकर्मी भनेका जनतालाई सधै त्रासमा राखेर आफ्ना रवाफ देखाउँदै मनपरी गर्न खोजेको जस्तो देख्नुपर्दा मनमा धेरै प्रश्न आउँदा रहेछन् । सकभर त्यस्तो सुन्न देख्न नपरोस् ।
लमहीको छैठौं नगरसभा